Safal Khabar - प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाउँदा किन गएनन माधव नेपाल ?
प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाउँदा किन गएनन माधव नेपाल ?
प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाउदा माधव नेपाल नगएपछि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमाल नै पुगे माधव नेपालको निवास
सोमबार, १५ असार २०७७, ०९ : ०४
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नै कार्यशैलीका कारण अहिले अप्ठयारोमा छन । उनको सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रक्रियासँग पार्टीकै नेता सन्तुष्ट छैनन् । तर उनी पार्टीभित्रको अप्ठयारो छल्न र नेता फकाउने अभियानमा भने निरन्तर लागि नै रहेका छन् ।
त्यही क्रममा फकाउने रणनीति अन्र्तगत उनले पूर्व एमालेका बीचमा बलियो एकता आवश्यक रहेको कार्ड फ्याकिरहेका छन् । यो कार्ड उनको भन्दा पनि उनका सहयोगी प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलको हो । पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व एमाले धारका बीचमा बलियो एकता काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक पटक दिदै आईरहेका छन् । केपी ओलीले पनि सोही अनुसार आफुभित्र परेको अप्ठयारो टार्न उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई बेलाबेला प्रयोग नगरेका पनि होइनन् ।
तर यो पटक उनलाई यो कार्डले पनि थेग्न नसक्ने देखेपछि कुर्सी कसरी बचाउने भन्नेमा अनेक फन्डा शुरु गरेका छन् । त्यही क्रममा उनले आफुलाई हटाउन भारत सक्रिय रहेको र नेपालका नेताहरु पनि त्यसमा सामेल भएको टिप्पणी गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बालुवाटार वोलाएर छलफल गर्न चाहेका थिए ।
उनले पार्टीका विषयमा छलफल गर्नुपरयो, बालुवाटार आउनुहोस्, माधव नेपाललाई टोलिफोनमा कुरा गरेका थिए । तर नेपालले ओलीलाई पार्टीमा छलफल चलिरहेको, बैठक बसिरहेको र त्यही बैठकमै सबै कुरा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । दुई दिन यता आफ्नो आलोचना हुने ठानी प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक छलिरहेका छन् । बुधबार स्थायी समिति बैठक शुरु भएपछि एक दिन स्थगित भएको बेला बिहिबार ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
अब सिधा लेनदेनमा प्रवेश गरौ, लौ भन्नुहोस् तपाई कँहाबाट चुनाव लडने ? कहिले गराऔं चुनाव ? ल तपाई संसदमा आउनुपरयो ? प्रधानमन्त्रीले गौतमसँग भनेका थिए, संसदमा ल्याउन म तपाईलाई सहयोग गर्छु, तपाईले पार्टीको अप्ठयारोमा मलाई सहयोग गर्नुपर्यो । तर गौतमले आफुलाई संसदमा लैजाने नलैजाने विषय पार्टीको जारी बैठकमै लिएर जानुहोस्, जाने नजाने मेरो इच्छा । तर अब म त्यसरी जान्न । मलाई सधै प्रयोग गर्ने सोच नराख्नुहोस, म पार्टीमा आफनो कुरा लिखित नै राख्छु, अरु त्यही छलफल गरौला ।
गौतमले साथ नदिने देखेपछि ओली शुक्रबारको बैठकमै सहभागी भईदिएनन् । शनिबार पनि बालुवाटारभित्रकै बैठकमा ओली अनुपस्थित भएको भन्दै चर्काे आलोचना भएपछि मुख देखाउनका लागि मात्रै बैठक हलमा प्रवेश गरे र लगत्तै बाहिरिएका थिए । आफ्नो आलोचना हुने देखेपछि ओली नेकपाको पार्टी बैठकमा बस्न सकिरहेका छैनन् । तर जुन हलमा नेकपाको बैठक बसेको थियो, त्यही हलबाट उनले हिजो भने आफुलाई लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरेर संविधानमा समेटेकै आधारमा भारतले हटाउन सक्रिय हुन थालेको आरोप लगाएका थिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, ओलीले गौतमलाई फकाउने प्रयास असफल भएपछि हिजो बिहान वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग छलफल गर्न चाहेका थिए । तर नेपालले प्रधानमन्त्रीले बोलाउदा समेत इग्नोर गरिदिए । त्यसपछि उनले आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार तथा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमाललाई नेता नेपालसँग कुरा गर्न कोटेश्वर निवास पठाए । रिमाल बिहान कोटेश्वर पुगेर नेता नेपालसँग कुराकानी गरे । पार्टीमा अहिले मिलेर जानुको विकल्प नभएको, केन्द्र देखि प्रदेश सरकारसम्म आफुले नेपालकै आग्रहका आधारमा हेरफेर गर्न तयार रहेको, पार्टीको महाधिवशेनपछि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको जस्ता प्रस्ताव लिएर रिमाल नेपाल भेट्न पुगेका थिए ।
तर नेपालले पार्टीमै छलफल भएकोले यसमा अब आफुले केही बताउन नसक्ने र जे निर्णय गर्छ अब पार्टीले नै गर्छ भन्दै जवाफ फर्काईदिए । रित्तो हात कोटेश्वरबाट फर्केका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले बालुवाटार फर्केर छलफलका विषय प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाए । त्यसपछि ओली गलेका थिए । अनि उनले मदन भण्डारीको जन्म दिनमा बालुवाटारमै आयोजित कार्यक्रममा आफुलाई हटाउन भारत सक्रिय रहेको अभिव्यक्ती दिएका थिए । दिल्लीका सञ्चारमाध्यम सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छकी कँहा–कँहा के के भईरहेको छ ।
यहाँको होटलहरुमा भईरहेका गतिविधि हरु हेर्नुहोस, त्यसले पनि देखाईरहेको छ । एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि देखाईरहेको छ । तर म तपाईहरुलाई यति भन्छु, नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर छैन, संविधानमा नक्सा सामेल गरेकै कारण प्रधानमन्त्रीलाई हटाउछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन, ओलीले बालुवाटारमा गरेको सम्बोधनका क्रममा बोलेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ती आत्मबल कमजोर भएका कारण आएको विश्लेषण गरेका छन्, राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले ।
कुनै विदेशी दुतावास आफुलाई हटाउन सक्रिय भएर लागेको छ भने त्यस्तो राजदुतलाई बालुवाटार बोलाएर उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले स्पष्टिकरण सोध्न सक्नुहुन्थ्यो, किन सोध्नु भएन, त्यस्तो लागेको भए, पोखरेलले भने, यो उहाँमा देखिएको डर बोलेको हो, उहाको आत्मबल कमजोर भएपछि सरकारमा टिकीरहन का लागि आफुलाई राष्ट्रवादी देखाउने र भारतलाई देखाएर सरकार टिकाउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न खोज्नुभएको हो ।
के झलनाथ फकाउन खोज्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली ?
नेकपाका एक प्रभावशाली नेताले सफलखबरसँग भने,– ओलीको...
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले बुधबार अपरान्ह पत्रकार...
मध्यरातमा माधव नेपाल किन उडे ट्युनिसीया ?
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल...